2BR/2BH flat Los Alamos yedolobha. Izilinganiso zikahulumeni - I-Airbnb
2BR/2BH flat Los Alamos yedolobha. Izilinganiso zikahulumeni
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Olga
Ifulethi elihle, lesimanje le-2BR/2BH, elitholakala kalula phakathi kwedolobha. Jabulela izindawo zokudlela ezihamba phambili nokuzijabulisa ngaphakathi kwebanga lokuhamba kalula! Amaminithi angu-5 ushayela uya e-LANL, amaminithi angu-3 ukuya esitolo segrosa sika-Smith, amaminithi angu-1-2 ukuya etiyetha yama-movie, umtapo wolwazi, ne-swimming pool. I-YMCA, i-Starbucks, inkundla yokudlala, izitobhi zamabhasi, nemizila ehamba phambili ye-LA nayo ikude ngemizuzu.
Nakuba ukuhlala kwethu okuncane kuyizinsuku ezingu-30, siyakwamukela ukuhlala okufushane futhi! Ukubhukha ukuhlala isikhathi esifushane kuyatholakala phakathi noma eduze nokubhukha okude, kanye nezinsuku ezingu-1-7 ngaphambi kwedethi yokufika.
Siyajabula ukunikeza AMA-RATES KAHULUMENI kuzo zonke izihambeli zethu (amaholide nokuhlala isikhathi esifushane kungase kube nenani elihlukile). Sicela uqaphele, futhi kukhona imali yokuhlanza kanye kuphela phezu kwe-diem ngayinye, engamboziwe yi-LANL.
Leli fulethi elihle, elihlotshiswe kahle elinobuhlakani baseYurophu lizokwenza uzizwe usekhaya ngokushesha. Sengeze ukuthinta okuningi komuntu siqu ukuze sakhe umoya ofudumele, othokomele, ophumuzayo - izincwadi ezinhle, ubuciko obusodongeni, nezinto zakudala ezimbalwa (umnsalo woMdabu waseMelika wama-1930 onemicibisholo uyintandokazi yethu).
Impahla itholakala eduze kwazo zonke izinsiza zedolobha futhi kungakapheli imizuzu emi-5 yokushayela (noma uhambo oluhle lwemizuzu engama-20-30) ukuya eLANL. Izindawo zokudlela ezinhle, izitolo zekhofi, iminyuziyamu, umculo obukhoma, inethiwekhi eyinkimbinkimbi yezindlela - konke kungakapheli imizuzu embalwa yokuhamba!
Ikhishi lifika ligcwele umpheki wangempela. Iphelele ngesiqandisi esigcwele usayizi, isitofu/uhhavini, imicrowave, abenzi bekhofi (yebo, abambalwa, ngoba abantu bathanda kakhulu :) ), i-toaster, izixube zokumisa nezandla, iprosesa yokudla, i-blender, i-rice cooker, amabhodwe, amapani, izitsha, iziqukathi, izinkomishi, izingilazi zewayini, izitsha, njll. Emakhabetheni, uzothola ikhofi, itiye kanye nokusanhlamvu. Izivakashi zethu zivame ukushiya ukudla okwengeziwe esiqandisini, zikhululeke ukusebenzisa noma yini ekukhuthazayo, kodwa sicela uhlole idethi yokuphelelwa yisikhathi.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nenkosi onomatilasi we-posturepedic memory foam onethezekile, igumbi lokulala lesibili linombhede wezinsuku ezimbili nomatilasi wamawele wesibili ku-trundle ephuma ngaphansi. Igumbi lesibili lokulala linedeski. Kuhlinzekwa amalineni ombhede, amakhava e-duvet, namathawula. Ekhabetheni uzothola amathawula engeziwe, amashidi, izingubo zokulala, imicamelo.
Kunamagumbi okugeza amabili eyunithi. Enye ineshawa futhi ixhunywe ku-Master bedroom, enye indlu yokugezela inobhavu wokugeza. Jabulela ubhavu ojulile kanye nokunikezwa okungapheli kwamanzi ashisayo avela ku-heater yamanzi enkulu yesakhiwo!
Iwasha/Isomisi esihlangene sitholakala kuyunithi, ngaphezu kwegumbi lokuwasha elisetshenziswa uhlamvu lwemali eliphansi kwesakhiwo (ungalokothi ukubuke phansi ubumnandi bokuhlangana nabantu bendawo abathakazelayo lapho :) ).
SIYANAKEKELA izihambeli zethu ezizwelayo, futhi sisebenzisa kuphela amakha angenawo amakha, odokotela besikhumba kanye nodokotela bezingane batusa okokugeza izingubo kuzo zonke izingubo zokulala namathawula. Siyiqaphela impilo kanye nemvelo futhi sizama ukusebenzisa imikhiqizo yokuhlanza "engenabuthi" noma nini lapho kungenzeka. Uma unokuzwela okudingeka kukhulunywe ngakho, sicela usazise, futhi sizokwenza konke esingakwenza ukuze sikuvume.
Senza isiqiniseko, ukuthi izivakashi zethu abe cookware enempilo. Nakuba sinazo izitsha zokupheka ezingezona izinti zalabo abathanda ukuzisebenzisa, siphinde sibe namasethi e-ceramic angagxili (i-ceramic iyindlela enempilo ehlukile kune-Teflon), insimbi engagqwali kanye nensimbi ethile. Sithemba ukuthi izivakashi zethu zizokujabulela ukupheka!
I-condo inendawo yokupaka eyodwa eyabelwe engaphansi kwesakhiwo. I-condo ifakwe isiphephetha-moya ukuze uhlale unethezekile ngezinsuku ezishisayo zasehlobo kanye nevulandi enezihlalo ezimbili ezithokomele ukuze ujabulele ikhofi lakho lasekuseni, ingilazi yewayini, noma ubukele ukushona kwethu okuhle kwelanga. Iningi lamayunithi ezakhiweni kuhlala abasebenzi be-LANL nemindeni yabo, enikeza indawo ephephile, enobungani bomndeni.
Indawo ye-condo ingenye yezindawo ezihamba phambili edolobheni. Kungaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5-10 ukusuka e-LANL (imizuzu emi-5 ukuya ehhovisi lebheji le-LANL), uhambo oluyimizuzu emi-2-3 ukuya esitolo segrosa saSmiths, uhambo oluyimizuzu emi-3 ukuya e-YMCA, uhambo oluyimizuzu eyi-1 ukuya e-Urgent Care (enhle kakhulu). isikhungo, kodwa ngethemba ukuthi awusoze wasisebenzisa!), Ukushayela iminithi elingu-1 ukuya esibhedlela, uhambo lwamaminithi angu-2 (noma uhambo lwamaminithi angu-6) ukuya esikhungweni se-Aquatic esinechibi lokubhukuda elingaphakathi elilingana ne-Olympic.
Izindlela eziseduze kakhulu ze-condo yimizila esesigodini se-Acid ngemuva kwedamu lokubhukuda kanye nesikhungo semvelo (imizuzu engu-6 uhamba ngezinyawo). Ngaphandle kwegama, okungenzeka linokubaluleka okuthile ngokomlando, imizila ye-Acid canyon iyintandokazi yendawo, ikakhulukazi ehlobo. Zilungiselele ukuchitha amahora ambalwa uwahlola, futhi uphathe isifutho sebhere nawe, njengoba abantu bendawo kungebona bodwa abajabulela izindlela. Izilwane zasendle zichichima lapha e-Los Alamos!
I-condo kufanele ibe nakho konke okudingayo, kodwa uma kwenzeka siphuthelwe okuthile, sicela usishayele sizokulethela! Ngizamile ukufaka zonke izinto okufanele zishiwo encazelweni, kodwa uma ngishiye ngaphandle noma yini, ebalulekile kuwe, ngicela ungangabazi ukuthintana! Ngihlale ngibheke ngabomvu ukusingatha abantu abakhulu nokwenza isikhathi sabo ezindaweni zethu sikhululeke futhi sijabulise!
I-condo ingaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5-10 ukusuka e-LANL (imizuzu emi-5 ukuya ehhovisi lebheji le-LANL), uhambo lwemizuzu emi-2-3 ukuya esitolo segrosa saSmiths, uhambo lwemizuzu emi-3 ukuya e-YMCA, uhambo oluyimizuzu eyi-1 ukuya e-Urgent Care ( indawo enhle, kodwa ngethemba ukuthi awusoze wayisebenzisa!), Ukushayela iminithi elingu-1 ukuya esibhedlela, uhambo lwemizuzu emi-2 ukuya esikhungweni se-Aquatic esinechibi lokubhukuda elingaphakathi elilingana ne-Olympic. Hamba uye ezindaweni zokudlela ezimaphakathi nedolobha, iminyuziyamu, i-Starbucks, umtapo wolwazi, indawo yokubhukuda, i-YMCA, nezindlela! Izitobhi zamabhasi (zasendaweni kanye neziya e-Santa Fe) nazo zisekude ngemizuzu embalwa.
Sishiya izivakashi zethu ukuze zijabulele ubumfihlo bazo obuphelele, kodwa uma usidinga, sisuke singekho! Sitholakala ngemiyalezo ye-airbnb, ucingo, kanye nemiyalezo.